Shirkii RW Rooble iclaamiyay iyo rajada laga qabo | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii RW Rooble iclaamiyay iyo rajada laga qabo
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobe ayaa iclaamiyay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowad goboleedyada, haddaba rajada laga qabo shirkaasi intee ayey la egtahay?
MUQDISHO, Soomaaliya - RW Rooble ayaa 2 -dii bishan May iclaamiyay shir kii wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasoo ay isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka si loo dhammeystiro heshiiskii 17 -kii September ee Muqdisho lagu gaaray iyo is afgaradkii guddigii farsamada 16 -kii Febaraayo ee magaalada Baydhabo.
Rooble ayaa xambaartay mas'uuliyadda ah in uu hoggaamiyo arrimaha amniga iyo doorashooyinka kaddib markii uu caqabado badan kala kulmay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo dhinacyada ka aragtida duwan ee mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada qaar, waxaana si rasmi ah loogu wareejiyay arrintan hoggaaminta doorashooyinka iyo amniga 1 -dii May 2021 xilligaasoo madaxweyne Farmaajo uu hor tagay Aqalka Hoose ee Baarlamanka.
RW Rooble oo u muuqda nin siyaasaddiisu daggan tahay, aadna u jilicsan ayaa laga sugayaa in uu qaado tallaabadii ugu horreysay ee qabashada shir ay u dhan yihiin madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo caqabadaha ku hor gudbanna ay yihiin kuwii hore ee Farmaajo dhaafi waayay, inkastoo uu u muuqdo nin tanaasul badan haddan dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uusan kaligii go'aan qaadan karin!
Waxaa jiray shir uu la yeeshay xubnaha ugu cad-cad mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, waxa uu kula shiray Hotel ku dhex yaal gudaha garoonka Aadan Cadde oo kamida goobaha ammaankooda aadka loo ilaaliyo oo ay joogaan AMISOM. Shir qaatay ilaa saddex kulan ayey yeesheen isaga iyo xubnaha mucaaradka, ugu dambeyntiina waa lagu kala tagay iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin!
Golihii musharaxiinta ayaa ku eedeeyay RW Roobe in uu yahay qof aan go'aan gaari karin, una baahan mar kasta inuu la tashado madaxweyne Farmaajo, qodobadii la hor dhigay qaar kamida ayuu si cad u qiray inuusan kaligii go'aan ka gaari karin, una baahan yahay in uu dib ula laabto mas'uuliyiinta dowadda uu kala jeedo Farmaajo.
Shirka la filayo in uu qabsoomo 20 May ayaa shaki weyn laga qabaa, waxaana la leeyahay waa suura-gal in uu dib uga dhaco, maadaama dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay wataan shuruudo hor leh oo ay ku xirayaan ka qeyb galka shirka, Rooble oo xalay dib ugu soo laabtay dalka isagoo soo Cimreystay ayaa la filayaa inuu billaabo dadaallo uu ku dhaqan galin karo qabsoomidda shirkaasi.